Laba daran mid dooro oo soo wajahday ganacsatada Degmada BeledXaawo (Maxaa cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Laba daran mid dooro oo soo wajahday ganacsatada Degmada BeledXaawo (Maxaa cusub?)
BeledXaawo (Halqaran.com) – Xaalad adag ayaa soo wajahday ganacsatada Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo, kadib markii dadkii ku dhaqnaa degmadaasi lagu khasbay inay guryahooda isaga cararaan.
Barakac ayaa maalintii saddexaad laga soo sheegaya in uu ka socdo Degmada Beled Xaawo, iyadoo dadka reer Beled Xaawo ay Axadii sameeyeen barakacii ugu ballaarnaa.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Jubbaland ayaa u biro tumanaya dagaal ku dhex mara Degmada BeledXaawo, si hal dhinac ay ugu gacan gasho gacan ku haynta degmadaasi. Saan saan colaadeed oo aan wanaagsanayn ayaana ka jirta degmadaasi.
Tani ayaa waxay baqdin ku keentay ganacsatada, xilli Degmada BeledXaawo ay tahay rugta ganacsiga ugu weyn ee Gobolka Gedo, marka aad eegto goobta istiraatiijiga ahi ee degmadu ku taalo. Degmada ayaa ku taala barta kala qaybisa Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya.
Maxamed Mursal oo ka mid ah ganacsatada ugu waaweyn ee Degmada BeledXaawo ayaa sheegay inay laba daran mid dooro soo wajahday, haddii aanay jirin cid u dam-qanaysa dadka deegaanka.
“Laba kala daran mid dooro ayaan hadda mareynaa, inaan nafteena la cararno oo ganacsigii aan ka tagno iyo inaan iska joognoo oo hantideena ku dul dhimano. Wax kale oo ka dhaxeeyaa ma jiraan.” Ayuu yiri Maxamed Mursal.
Ganacsadaha oo la hadlay warbaahinta Halqaran.com ayaa yiri “Cid u naxeysa shacabka iyo ganacsigaba ma jirto, waa loo soo bareeray in la dhibaateeyo deegaankan, dadkana laga qaxiyo guryahoodii.”
Maxamed Mursal ayaa Dowladda Federaalka iyo Maamulka Jubbalandba ku dhaliilay inaanu midkoodna u tureynin dadka deegaanka, hase ahaatee uu mid kasta u cararayo sidii uu yoolkiisu u gaari lahaa.
“Walaa dowlad baan u tureynin, walaa maamul kalaa u naxeynin, nin kastana dantiisa ayuu fiirinayaa, lama hayo cid hoos u fiirineysa maatidii ku hoos noolleed.” Ayuu yiri Maxamed Mursal.
Dadaaladii ay garwadeenka ka ahaayeen Odayaasha Dhaqanka iyo Waxgaradka Degmada Beled Xaawo ayaa iminka u muuqdo mid guuldareystay.
Barakac ka socda BeledXaawo
Laba daran mid dooro oo soo wajahday ganacsatada Degmada BeledXaawo